VaPupurai Togarepi Voita Dzepfunde Zvakaitwa nePolitburo yeBato Ravo
Kukadzi 08, 2020
Mumiri we Gutu South mudare reNational Assembly, uye vari mukokeri weZanu PF mudare iri, Va Pupurai Togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nePolitburo yebato ravo, iyo yakambovamisa basa rekuva mumuriri wevechidiki muPolitburo.
Va Togarepi vakamiswa basa iri pamwe nevamwe vaviri vechidiki, Va Lewis Matutu naVa Godfrey Tsenengamu.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemusi weMuvhuro, VaMatutu naVaTsenengamu vakakurudzira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti varwise huori huri kuitwa nevamwe vakuru vakuru munyaya dzemabhizinesi.
Vechidiki ava vakadoma sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe, VaTafadzwa Masarara; mukuru weSakunda Holdings, VaKudakwashe Tagwireyi, uye mukuru weGreen Fuels, VaBilly Rautenbach, sevanhu vari kuita huori hwakanyanyisa munyika.
Vatungamiri veZanu PF Youth League Vanodoma VaBilly Rauntebach, VaTafadzwa Musarara naVaKuda Tagwirei Sevanhu Vari Kuita Huwori
Vachizivisa chisungo chePolitburo, vakafanobata chigaro chemutauriri webato, VaPatrick Chinamasa, vakati vatatu ava vambomiswa kuita mabasa avo mubato kwegore rose, uye vanokwanisa chete kuzokwikwidza zvigaro zvemubato mushure megore kubva musi wavamiswa kuita basa nebato, uye kana vachinge vapedza zvidzidzo zvegwara rebato kuChitepo School of Ideology.
VaTogarepi vanoti munhu anoziva zvinoitwa nebato ravo, nokudaro vachaita zvose zvinodiwa nebato.
VaTogarepi vanotiwo vachiri nhengo yeZanu PF yakazara, uye vacharamba vachienderera mberi nekuita basa ravo rekumirira vanhu vakavasarudza.
Asi mumiriri weGutu South uyu anoramba mashoko ekuti pane vakuru vakuru vari kuvashandisa muZanu PF.
Hurukuro naVaPupurai Togarepi
Asi imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, VaTendai Ruben Mbofana, vanoti vechidiki ava havaifanirwa kunge vakaomeserwa mushure mekufumura huori huri kuitwa nevamwe vakuru vakuru vanodyidzana neZanu PF.
VaMbofana vanotiwo havaone chinganodzidzwa nevechidiki veZanu PF kuChitepo School of Ideology, sezvo zviri kuratidza pachena kuti zvaifumurwa nevechidiki ava, zvinova zvehuori hwauraya nyika, zviri izvo zvakapa kuti vambomiswa mabasa avo muZanu PF.
VaMbofana vanoti zvakaitwa nevechidiki ava zvakanaka chose, uye Zanu PF yaitofanirwa kubuda nechisungo chekurwisa huori kwete kubuda nechisungo chinoranga vari kukurudzira kuti huori hupere munyika.
Hurukuro naVaTendai Ruben Mbofana